Ny Olona Tena Mahery Fo Vao Haingana Indrindra Any India : Tsy Hafa Fa i Mary Kom, Ilay Tompon-Daka Amin’ny Ady Totohondry · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2015 2:58 GMT
Ity lahatsoratra ity sy ny tatitry ny fampihelezam-peo avy amin’ny mpamokatra David Leveille ho an'ny Le Monde tany am-piandohana dia niseho tao amin’ny PRI.org ny 12 Jona 2015, ary averina avoaka eto ho toy ny ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty.
“Olona misongadina any India i Mary Kom”, hoy i Adrija Bose, mpamoaka lahatsoratra amin’ny media sosialy ao amin'ny Huffington Post, New Delhi. “Izy no nahazo ny medaly alimo tamin’ny Lalao Olaimpika 2012. Izy ihany koa no vehivavy mpanao ady totohondry eto amin'izao tontolo izao nahazo medaly tamin'ny Fifaninanana Eran-tany niisa enina, ary fianakaviana sahirana no niaviany… tantsaha ny ray aman-dreniny.”
Toy ny anipihan’i Bose azy, manana ny anjarany amin'ny olona manana toetra miavaka ho famonjena izao tontolo izao i India. Ohatra, misy an’i Priya, tovovavy niseho tamin’ny andian-tantara anaty boky mampihomehy Shakti izay noforonina tamin’ny 2012, taorian’ny fanolanana faobe mahatsiravina nitranga tao Delhi. Mampisongadina ny fiovana nataon’I Priya, sisa velona tamin’ny fanolanana faobe, ilay andian-tantara sarimiaina, noho izy mitolona amin’ny heloka bevava momba ny firaisana ara-nofo any India, eo ambany fitahian’ny andriamani-bavy hindò Parvati.